TONTOLON’NY FAMBOLENA : Efa lany andro ny lalàna mifehy ny fampiasana fanafodim-biby
Mitana anjara toerana lehibe eo amin’ny lafiny toekarena ny tontolon’ny fambolena eto amintsika. 26 septembre 2017
Saika ny ankamaroan’ireo faritra manerana ny Nosy dia samy manana ny voka-pambolena mampiavaka azy avokoa ary heverina ho anisany singa mampandroso ny faritra iray izany. Raha ny voka-pambolena no jerena, ankoatra ny tsena anatiny izay hita ho miroborobo tokoa, dia maro amin’ny vokatra no aondrana mankany ivelany.
Manoloana izany indrindra dia mila fitandremana sy fahamalinana ny sehatry ny fanondranana entana mba tsy hiteraka fatiantoka. Fantatra mantsy fa maherin’ny 1 tapitrisa taonina ny vokatra naondran’i Madagasikara no naverin’ireo firenena mpanafatra, araka ny antontanisa tao anatin’ny folo taona. Anisany antony lehibe nahatonga izany tranga izany ny tahan’ny fanafodim-biby nampiasaina izay ambony loatra ka tsy nampanara-penitra ireo vokatra. Araka ny fanadihadiana dia ny voamaina sy ny voanjo ary ny “cannelle” no betsaka tamin’izany.
Raha ny fanazavana hatrany dia lalàna efa tamin’ny taona 1986 no mbola mamaritra ny fampiasana fanafodim-biby atao amin’ny voly amin’izao. Vokany, tsy mifanaraka amin’ny tolotra sy ny tinady ary ny fenitra iraisam-pirenena intsony izany lalàna izany ka mila fanavaozana. Ny Fao sy ireo mpiara-miombon’antoka maro kosa no hiara-hiasa amin’i Madagasikara amin’ny famaritana izany lalàna vaovao izany.
Araka ny fanazavana dia ilaina ny fanavaozana ny lalàna mamaritra ny fampiasana fanafodim-biby mba hahafahana manatsara sy mampitombo ny vokatra mba hamaly ny filàn’ny tsena anatiny sy ny any ivelany. Araka ny fantatra mantsy dia ny fiovaovàn’ny toetrandro ankehitriny no miteraka biby kely vaovao na ihany koa aretina vaovao. Etsy ankilany dia misy ihany koa ireo aretim-biby kely azo avy amin’ny vokatra avy any ivelany.
Hatao laharampahamehana araka izany ny hamaritana indray ny lalàna mifehy ny fampiasana io fanafodim-biby io, mifanaraka amin’ny toetrandro. Anisany olana lehibe eo amin’ny lafiny toekarena raha toa ka mamokatra be nefa ny tsena eto anatiny ihany no manjifa ny vokatra fa tsy mivoaka avy ivelany raha ny fanazavana hatrany.
Ankoatr’izay dia hisy ihany koa ny fampitomboana ny fahaiza-manaon’ireo teknisianina eny anivon’ny seranan-tsambo na ihany koa seranam-piaramanidina. Tokony tsy ho adino mantsy fa any amin’ireny no mivezivezy ireo vokatra miainga avy any ifotony. Hatsangana ihany koa ny toeram-pitiliana efatra izay efa nahazo fankatoavana avy amin’ny vondrona eropeana hanao fitiliana ireo vokatra alohan’ny hanondranana azy, araka ny fanazavana hatrany.